Technutri - ကယ်လိုရီကောင်တာများနှင့် carb tracker | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » Technutri - ကယ်လိုရီကောင်တာများနှင့် carb tracker
Technutri - ကယ်လိုရီကောင်တာများနှင့် carb tracker APK ကို
Technutri အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့သို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်, အာဟာရတိုးတက်အောင်များအတွက်စုံလင်သောကယ်လိုရီကောင်တာများနှင့် carb tracker တွင်ပါ! သငျသညျအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူတစ်ဦးသောအစားအစာကိုလိုက်နာနှင့်သင့် pics, ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အစားအစာအကြံပေးချက်များ share နိုငျပါသညျ! ဒါ့အပြင်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အသားတင် carb စားသုံးမှုခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်သင့်အနိမ့် carb နှင့် keto အစားအစာကိုထောကျပံ့ဖို့အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီကိုသုံးနိုင်သည်! ကျန်းမာဖြစ်ခြင်းဒါလွယ်ကူပြီးရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှ! Technutri သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်
သင်အလွယ်တကူရေထဲကနေအစားအစာများဖို့, ရှိသမျှကိုသင်၏စားသုံးမှုကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စမှသင်၏မုန့်ညက်ကို select နှင့် Technutri သင်တို့အဘို့ကယ်လိုရီရေတွက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဖို့လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ သင်ပင်သစ်ကိုသင်တို့အားမုန့်ညက်ကိုထည့်သွင်းချင်ယခုအချိန်တွင်အင်တာနက် access ကိုရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! Technutri အဖြစ်ကောင်းစွာအင်တာနက်မလိုပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်!
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အစီအစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။ ဤအကြံပြုချက်များသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်, အသက်နှင့်ကျားမနဲ့တူ, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံကြသည်! ဒါဟာသင်ကကိုယ်အလေးချိန်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိအရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့သို့မဟုတ်သင့်အစာအာဟာရတိုးတက်စေမထားဘူး။ Technutri သင်ရှိသည်မသက်ဆိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးသင့်လျော်သောထောက်ခံချက်ပေးသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အများအပြားညွှန်ကြားချက်ဗီဒီယိုများတဦးတည်းကိုသုံးပြီးကောင်တာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီနဲ့ရေစားသုံးမှုရေတွက်အကောင်းဆုံးအာဟာရသတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. သင်၏အစားသုံးမှုကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
Technutri ကြံ့ခိုင်ရေး app ကိုပဲအခြားကယ်လိုရီတန်ပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသုံးပြုသူများလာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းရလိမ့်မည်။ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ရှိသည်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုအကြံပေးချက်များဖလှယ်သောသူတို့နှငျ့အတူတစ်ချက်တင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရယူပါ! အဆိုပါအစားအစာများ feed ကိုကြည့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အစားအစာများ၏ရုပ်ပုံများကို upload တင်လို့ရပါတယ်ခဲ့ကြသည်ရှိသည်။ သင်ကအစားအသောက်များ၏ကယ်လိုရီကိုကြည့်ကြပြီးအခြားကောင်းတဲ့မုန့်ညက် upload တင်သောအခါ, ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူနိုငျသညျ! မိတ်ဆွေများက Make နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောကျပံ့ပေး။ သငျသညျကျိန်းသေတစ်ဦးတည်းမဟုတ်,
သငျသညျပြီးသားသင်သည်သင်၏ပန်းတိုင်ကူညီပေးသည်သူတစ်ဦးအာဟာရ, မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာရှိပါသလား Technutri တို့သည်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်! ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်သူတို့စပ်ကြားပိုကောင်းအဆက်အသွယ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီနဲ့ရေစားသုံးမှုကိုလိုက်နာကြောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်သင့်ရဲ့စားသုံးမှု၏အာဟာရ data ပို့နိုင်ပါ။
Technutri သင့်ရဲ့အစားအစာကို support
သင်သည်မည်သည့်အနိမ့် carb အစားအသောက်များတွင်အောက်ပါပါသလား? Keto အစားအသောက်များတွင်? Paleo အစားအသောက်များတွင်? တစ်ခုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ? ဒါမှမဟုတ်အနိမ့်ပရိုတိန်းဓာတ်စာ? ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီကထောက်ခံကြသည်! ဒါဟာအဆီ, အသားတင် carbs, စုစုပေါင်း carbs, ပရိုတိန်းနှင့်အမျှင်အပါအဝင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်စားသုံးမှု, ထိန်းချုပ်ထားနှင့်သင်ခွင့်အရေအတွက်အထက်တွင်အခါဒါဟာသင်ပြသထားတယ်။
Technutri ပြီးသားသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်သန်း5ကျော်ကလူကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့် Technutri ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန်!
အနိမျ့ carb အစားအသောက်များတွင်
Technutri - ကယ်လိုရီကောင်တာများနှင့် carb tracker
13.89 ကို MB